Fitantanam-pitondrana · Febroary, 2009 · Global Voices teny Malagasy
Fitantanam-pitondrana · Febroary, 2009
Tantara mikasika ny Fitantanam-pitondrana tamin'ny Febroary, 2009
Korea Atsimo11 Febroary 2009
Mampientanentana ny olona na aiza na aiza ny fiandrasana ny taona vaovao. Miara-mivory amin'ny toerana iray ny olona mandray ny taona vaovao. Eto Korea dia eny amin'ny tilikambom-pamataranandron'i Bosingak ny olona no mifamotoana. Kanefa toa niainga tamin'ny korontana ity taona ity. Tsy maintsy nametraka ny onjam-peom-bahoaka KBS eo amin'ny toeran'ny...
Malezia : ady amin'ny dengy sy ny tsikongonia
Fahasalamàna11 Febroary 2009
Vokatry ny fitomboan'ny olona mararin'ny dengy dia manao fanentanana amin'ny ady amin'ity aretina ity ny fanjakana Maleziana. Araka ny fantatra tamin'ny volana lasa dia nahatratra 4 521 no isan'ny olona narariny ary 13 no matiny. Mampatahotra ny fiakaran'isan'ireo mararin'ny dengy. Tamin'ny taon-dasa dia nahatratra 49 335 ny isan'ny olona narary...
Hong Kong (Shina)06 Febroary 2009